James Swan ayaa u safraya Dhuusamareeb si uu u xaliyo khilaafka doorashada - Axadle Raadiyaha
James Swan ayaa u safraya Dhuusamareeb si uu u xaliyo khilaafka doorashada – Axadle Raadiyaha
Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug si uu ula kulmo Hogaamiye Axmed Cabdi Kaariye, ku xigeenkiisa iyo mas’uuliyiinta maamulka gobolka.
James, booqashadiisa Dhuusa Mareeb ayaa qeyb ka ah kulamo isdaba joog ah oo uu dhowaan bilaabay inuu xal ugu helo khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ee sanadka 2020 oo muddo dheer dib u dhac ku yimid lana qorsheeyey in lagu sameeyo BFS
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Swan wuxuu u safray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed & Garoowe, caasimada Puntland, halka Axmed Madoobe, Hogaamiyaha Jubbaland uu khadka taleefoonka kula hadlay.
Qorshaha James Swan ayaa ah inuu dhammeystiro toddobada maalmood ee ka harsan Janaayo 2021 isagoo xallinaya oo dhageysanaya talooyinka daneeyayaasha siyaasadda ee saxiixay heshiiska doorashada Sebtember 17, 2020.
Mudada 14-ka maalmood ah ayaa kahoreysa mudada Hogaamiyaha JFS Mudane Max’ed C / llahi Farmaajo, oo ah muddadii ugu dambeysay ee hay’adaha kala duwan ee dowladda, maadaama la doortay 8-dii Febaraayo, 2017, taasoo soo afjartay muddo xileedkiisii ​​dastuuriga ahaa ee afarta sano ahayd.
Maxaa ku dhacay James Swan dhawr maalmood gudahood?
Safiirka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa suurta galiyay in Madaxweynayaasha Maamulada Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland, Jubbaland & Koonfur Galbeed in ay wada xiriiraan si ay uga wada hadlaan kala qeybsanaantooda, maadaama Puntland iyo Jubbaland aysan u gudbin Gudiga doorashada.
James wuxuu balan siyaasadeed la leeyahay hogaamiyayaasha DFS, halka Midowga Musharaxiinta ay kulmi doonaan kadib booqashooyinkiisa Xarunta Dowlad Goboleedka si loo dhageysto tabashooyinkooda.
Muxuu Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya u farageliyey arrintan?
Shaqsiyaad kala duwan, oo intooda badan si dhow ula socda xaalada Soomaaliya, ayaa Axadle u sheegay in sababta uu u faragaliyay Danjire James Swan ay tahay dabacsanaan siyaasadeed oo ka imaaneeysa dhinacyada ku lugta leh howlaha doorashada. dheg ka dhigay.
Haddaba, James Swan ma wuxuu si rasmi ah u xallin doonaa khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya mise wuu ku dhici doonaa?
Yuu yahay xiddigooda mustaqbalka ugu weyn?
Ole Gunnar Solskjär ayaa magacaabay seddex xiddig